Gui Minhai oo xabsi dalka Shiinaha ku yaal laga sii daayey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gui Minhai ( biddix) iyo gabadhiisa Angela. Photo : TT/SvD/Kin Cheung/Anders Ahlgren
Gui Minhai oo xabsi dalka Shiinaha ku yaal laga sii daayey
La daabacay tisdag 24 oktober 2017 kl 13.05
Gui Minhai oo ah nin Iswiidhish ah oo buugaagta daabaca, kuna xirnaa dalka Shiinaha muddo laba sano ah ayaa imminka la sii daayey, sida ey sheegtey wasaaradda arrimaha dibadda Sweden.
Sidaas oo ey tahay hadana ilaa iyo hadda lama oga meesha dhabta ah ee uu ninkaasi imminka ku sugan yahay sida eheladiisa oo wasaaradda arrimaha dibadda Sweden la soo xiriirey ey sheegeen. Qoraagaan ayaa daabici jirey buugaag lid ku ah xukuumadda dalka shiinaha.
Gui Minhai oo asal ahaan u dhashey Hong Kong balse heysta dhalashada dalkaan Sweden ayaa bishii oktobar ee sanadkii 2015-kii, waxaa mar qura laga waayey goob lagu dalxiiso oo ku taal dalka Thailand oo uu markaas fasax dalxiiis ah u joogey.
Bishii janaayo 2016-kii ayaa talefishinka CCTV oo ey dawladda shiinuhu leedahay wuxuu baahiyey cajalad muuqaal ah oo uu Gui Minhai ku sheegey in dalka shiinaha uu ugu soo noqdey si uu u qaato mas’uuliyadda shil baabuur oo uu isagu geystey, warbaahinta shiinuhuna waxay xilligaas sheegtey in ninkaas la xirey.